I-Avid Ikhulisa Ukulawulwa Kwomsindo I-Portfolio Portfolio ukuze Yenze Ikheli Elihle Lezidingo Ezincane Neziprofetho Zeprojekthi - I-NAB Bonisa Izindaba Ngokusakaza Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Avid Inwebisa I-Audio Control Surface Portfolio ibe Nezidingo Ezinhle Zedivayisi Yezinsiza Ezincane Neziprofetho Zeprojekthi
Avid Xhuma bukhoma, NASHVILLE, Tenn., Julayi 18, 2019 - At I-Avid Connect Live Nashville Ehlobo NAMM 2019, Avid® (I-Nasdaq: I-AVID) wavula ezimbili zokulawula umsindo omusha-the I-Avid S4 futhi I-Avid S1- abaqeqeshiwe ezinkampanini ezincane kanye nama-studios ephrojekthi. Le mikhiqizo inikeza izixazululo ezihlanganisiwe kakhulu, eziqinile kodwa ezingabizi futhi zizotholakala ngasekupheleni kwe-2019.
Avid I-S4 iletha amandla nemisebenzi yokusebenza Avid's ukuhola imboni Amathuluzi we-Pro | I-S6 ukulawula ubuso kubasebenzi abalalelwayo abaqaphele isabelomali kanye nomculo omncane ophakathi nendawo nosayizi wokuthunyelwa komsindo kuphakeji ye-ergonomic neyinkimbinkimbi. I Avid I-S1 inikeza isivinini esingenakufaniswa, impendulo ecebile yokubukwa, nokuhlanganiswa kwesofthiwe AvidIzindleko eziphezulu eziphephile ezisezingeni eliphathekayo, elisezingeni elincane elilula kakhulu kunoma yimuphi isikhala noma isabelomali.
"The Avid I-S4 kanye ne-S1 yokulawula izindawo zivule umhlaba wamakhono akakaze kube khona ngaphambi kwabaculi bomculo, ama-studios amancane nezikhungo zemfundo, ukuphendula izingcingo zamakhasimende ethu amandla, imisebenzi yokusebenza kanye nemisebenzi esemqoka ye-Pro Tools | I-S6 ekuxazululeni izixazululo ezingaphezulu futhi ezithengekayo kwi-studio, "kusho uRob D'Amico, uMqondisi, Ingxenye Yomsindo Nevidiyo ku Avid. "Avid ukulawula indawo, isofthiwe, i-O / O audio, kanye nokuqapha amandla okuhlanganisa ukudala uhlelo lochwepheshe ngokulawula nokuguquguquka kumaninwe womsebenzisi. "
Ukuhlanganiswa kwezinga lomhlaba ngama-studios amancane Avid S4
Idizayinelwe ama-studios omculo omncane kuya kumaphakathi nendawo nezikhungo zokuthunyelwa komsindo, Avid I-S4 inikeza imfashini esezingeni elijwayelekile le-S6 emsebenzini kunoma imuphi umhleli noma i-mixer. Isebenza futhi izwa njengokwandiswa kwesofthiwe, ihlinzeka ngokuhlangenwe nakho okuhlangene nakho nganoma iyiphi i-DAW enikwe amandla e-EUCON, njenge-Pro Tools, Nuendo, Pyramix, i-Logic Pro, i-Cubase, nezinye izinhlelo zokusebenza zomsindo. I-S4 inika amandla abanikazi ukuba banikeze futhi balawule ngokushesha ukukhuluma, ukulalela, nemithombo yesikhulumi kanye namazinga ukusuka phezulu ukuze abambe yonke into ekuxubeni okulula kokumculo okurekhoda ukuze kuqaphele amaphrojekthi we-audio emmersive.
I-S4 inikeza impendulo ebanzi kakhulu, enekhono lokubonisa konke kusuka kumamitha wesiteshi, amaqembu, ama-curve e-EQ, kanye nedatha yokuzenzakalela, ukupheqa amafomu wokuguqula ama-Pro Tools aphezulu, angalungiswa ngqo kusuka phezulu. I-easy-to-configure, surface-modular surface inikeza abasebenzisi ukuguquguquka kokwakha uhlelo oluhle lomsebenzi othize, kusuka ku-8 kuya ku-24 faders, enekhono lokungeza izibonisi, izinjabulo, okuthunyelwe kanye namamojula wekhono. Uma ubhanjwa namaPro Tools | Ekugcineni, i-S4 ihambisa izandla ezisebenza kahle kakhulu ku-Dolby Atmos ezixuba embonini kunoma iyiphi indawo.
Hlanganisa kakhulu kunoma iyiphi isikhala Avid S1
Avid I-S1 inikeza ochwepheshe bomsindo isisindo, ukucacisa, nokuhlanganiswa kwesofthiwe okudingekayo ukuletha izingxube ezingcono kakhulu zokuzwakala. Kusukela ekurekhodweni nasekuhleleni amathrekhi, ukuxuba nokuqapha ku-stereo noma kuzungezile, i-S1 inikeza ukulawula okuphelele nempendulo ebonakalayo ukusheshisa noma yikuphi ukuhamba komsebenzi womculo. Njenge-S6 ne-S4, i-S1 entsha inikwe amandla yi-EUCON ukunikeza ukuhlanganiswa okujulile ne-Pro Tools ne-Media Composer, kanye nokwesekwa komdabu kwezinhlelo zokusebenza zangaphandle ezifana ne-Logic Pro, i-Cubase, i-Premiere Pro, nokuningi.
Nge-S1, abasebenzisi bangakwazi ukukala kalula indawo lapho izidingo zabo zikhula. Ochwepheshe bemisindo bangaxhuma amayunithi amane ndawonye — futhi bangangeze Amathuluzi we-Pro | Dock-Ukudala indawo eyodwa enwetshiwe nehlanganisiwe. Ukusuka kumafeshini e-motorised aphendulayo nezinduku zokufinyeleleka ekufinyeleleni okusheshayo kwesikrini sokuthinta kanye nezinkinobho zeSoftware zokuqedela imisebenzi eyinkimbinkimbi ngokuthinta okukodwa, i-S1 inikeza isivinini namandla ahlukahlukene okusheshisa noma yimuphi umculo, iposi lomsindo, noma iphrojekthi yevidiyo.
Joyina uMgubho Womphakathi Womhlaba Womhlaba
AvidUmcimbi we-Connect Live Nashville ugubha umphakathi wezomculo owakha, ukhiqize, wenze, futhi usakaze umculo wawo Avid amathuluzi wokudala nezisombululo. Kubandakanya amakilasi wokuqeqeshwa wamahhala walabo abakhona, ngezihloko ezimboza amasu wokuqopha isudiyo yobuchwepheshe, ubuchwepheshe bokuqopha bukhoma bama-gigs, ukuqopha idemo yakho, nokusuka sketch kuya engomeni. Izingxoxo zephaneli ye-Breakout zizofaka iDolby Atmos, ukudalwa komculo, ubunjiniyela bemisindo, ukuxubana komsindo, kanye nokukhiqiza umculo.
Umphakathi womculo emhlabeni wonke umenyiwe ukujoyina le micimbi ngokusakazwa bukhoma Isixhumanisi se-Avid, lapho izibukeli zingabamba iqhaza ku-Lounges futhi zihlangane nabaculi abanomqondo ofanayo. Avid Isixhumanisi singaba kulandiwe mahhala. Ukusakaza bukhoma nakho kuzotholakala ku avid.com futhi on Avidimithombo yezokuxhumana iphatha www.youtube.com/avid, www.facebook.com/avid, www.facebook.com/avidprotools, www.twitter.com/avid, Futhi www.twitter.com/avidprotools.
Avid wethula isithangami semidiya esivulekile nesisebenza kahle, oxhumanisa ukudalwa kokuqukethwe ngokubambisana, ukuvikelwa kwempahla, ukusatshalaliswa, kanye nokusetshenziswa. AvidUmphakathi wamakhasimende abaluleke kuqala AvidAmathuluzi aphelele nezixazululo zomsebenzi wakhe ukwenza, ukusabalalisa nokwenza imali ebukelwe kakhulu, ethandwa futhi ilalelwe kwabezindaba emhlabeni jikelele — ukusuka kumafilimu wokuphakanyiswa nokuwina umklomelo kuya kumabonwakude athandwayo, izinhlelo zezindaba kanye nemicimbi yezemidlalo yethelevishini, kanye nokuqoshwa komculo okuhlonishwayo namakhonsathi bukhoma. Ngezinketho eziguqukayo kakhulu zamanani nentengo, AvidIzisombululo ezihola phambili embonini zihlanganisa iMidiya umqambi®, Amathuluzi we-Pro®, Avid I-NEXIS®, MediaCentral®, iNEWS®, I-AirSpeed®, Sibelius®, Avid VENUE™, FastServe®, noMaestro™. Ngeminye imininingwane mayelana Avid izixazululo nezinsizakalo, vakashela www.avid.com, xhumana naye Avid on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, noma ubhalise ku Amabhulogi we-Avid.
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Avid Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida I-Cobalt Encoder Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ukuhlanganiswa i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw SJGolden - Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi	2019-07-18
Ngaphambilini: I-Avid Ihambisa Ukusabalalisa Kwemidlalo ku-Quarter Million Avid Link App Abasebenzisi
Olandelayo: I-Medialooks Yokuveza Ukuthuthukiswa Okubaluleke Kokubili Ezokuthutha Nezetuthuko Zezithombe ku-IBC2019